PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - SIVULA AMEHLO ABACULI:
SIVULA AMEHLO ABACULI:
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
UMfumfu (October) ube yisibusiso kubaculi abaningi nakubalandeli bomculo wasekhaya njengoba umsakazo ukhozi FM ludlale kwasani ewumculo wakuleli, kwezwakala.
Into enhle iyanconywa, sekwaze kwaba sengathi thina bezindaba sibhala okubi okwenziwa ngabantu kanti akunjalo, kusuke kuqondene nalolo daba.
Sizwe izingoma ebesesicabanga ukuthi sezalahlwa, sakhumbula ngisho abaculi osekukade sabagcina, ngiyethemba nabo lapho bekhona bathokoze baze bachiphiza izinyembezi.
Isibonelo nje, kuke kwadlalwa nezingoma zikamufi uvusi Ximba, ngacelwa ukuba ngiyokhuluma ohlelweni lukatshatha Ngobe noselby Mkhize.
Emuva kwalolo hlelo baningi abashaye izingcingo befuna lezi zingoma, saze saphoqeleka ukuba sicele inkampani yakwasony Music ukuba iphinde isigayele.
Sibethwesa uphaphe lwegwalagwala abaphathi bokhozi FM ngesinqumo abasithathile sokuba basihlephulele emanonini omculo wakithi wakudala omnandi futhi ohlabahlosile.
Ngalesi sinqumo sabo sebevule iminyango ebivaliwe, babuyisela emakethe imikhiqizo obese kuthiwa ayisadingeki emphakathini.
Zizodla manje izingane zabaculi abangasekho nabasebaphelelwa ngamandla ngenxa yokhozi FM. Neminye imisakazo mayilandele, idlale ingxubevange yomculo waleli lizwe, izobabona abalandeli ukuthi bazoyilandela kanjani.
Baningi abaculi abangaziwa yintsha okuthi uma kudlalwa izingoma zabo ibuze ukuthi ngubani lo mculi okhiphile.
Ngike ngezwa ngisho opatricia Majalisa, Bhekumuzi Luthuli, Mfazomnyama, Mahlathini namahhotela Queen, nabanye abaningi.
Izinhliziyo zethu zisathe cosolo- lo. Nalo ukhozi aluzame ukwakha izinhlelo lapho luzoke luxube izingoma zodwa noma ihora elilodwa nje esontweni, ngisho kungaba kwamabili, umsakazi abize ingoma nomnikazi wayo avale adla ngakho.
Isizwe singake sithokoze sazi ukuthi kunehora lomculo wodwa kushintshaniswe amasonto elandelana.
Umphathisiteshi okhozini, umnu Bonga Mpanza, wumphathi wezinhlelo, unkz Zandile Tembe, nenhloko yemisakazo yakwasaBC Kwazulu-natal, unkz Zamambo Mkhize, mabaphakele abalaleli babo okumnandi njalo bangaphezi futhi bangehlulwa yizwi lalabo abasebafushane ngolwazi kwezomculo, abezwa labo gqumgqum’ bamanje bese befuna kubeleselwe bona bodwa, bebhaca ngokuthi abalaleli yintsha kuphela.
Ngoba kusafanele kulandelwe nabo laba abahlale bethi benza uphenyo balethe izibalo ezithandwa yibo bengajulanga ngophenyo. Kulabo abasuke bephenya akube ngabaxubile abasha nabadala.
Nezinye izinhlelo zokhozi FM ziwudlalile umculo onhlobonhlobo, siyathokoza sikhombe lolu lwantambama ngoba kakade iminwe ayilingani.
Mabaphakele abalaleli okumnandi njalo, bangehlulwa yizwi lalabo abasebafushane ngolwazi kwezomculo.